China Edge Kugadzirisa Vulcanizing Press yeRubber Conveyor Belt Kugadzirisa fekitori uye vagadziri | Antai
Edge Kugadzirisa Vulcanizing Press yeRubber Conveyor Belt Kugadzirisa
Edge Kugadzirisa Vulcanizing Press yeRubber Conveyor Belt, irabha yekutakura bhandi inogadzira muchina, inonyanya kushandiswa kugadzirisa nzvimbo diki dzebhandi rekutakura, kukuvara kwekubaya, kunyanya inokodzera kugadzirisa refu nzvimbo misodzi uye zvinokuvadza munzira yekurebesa, kukwenya kwekutanga, bhandi repakati kugadzira, nezvimwewo Icho chishandiso chakanakisa uye mhinduro yekupisa kupisa vulcanization kugadzirisa, mubatsiri akanaka ekugadzirisa zvishoma mabhandi ekutakura. It’s anoshandiswa nyore nyore kugadzirisa anotakura mabhandi pane saiti. It’s nguva-yekuchengetedza, inoshanda uye mushandisi-inoshamwaridzika.
Muenzaniso XL-1000 * 270
Kureba urefu 1000mm
Kuchenesa Kukura kweplaten 1000mmx270mmx28mm
Kuchenesa Platen Bias Angel 90 Degree
Gross Wsere Wiyo Package 110kgs
Distance kubva kumucheto 250mm
Kudzora Bnzombe Voltage SeMutengi 's Zvinotarisirwa
Muchina wekugadzirisa bhandi unoshandiswa zvakanyanya, uye unogona kuiswa kune ekujoinha majoini eiyo-saiti yakanamirwa kufambisa mune simbi, indasitiri yemakemikari, simbi migodhi, magetsi emagetsi, madoko, dhoko, nezvimwe.
Shandisar Maitiro Ekushandisa：
（Zadza guruu munzvimbo dzakakanganisika dzinoda kugadziriswa;
） 2, Isa ndiro yepasi, pani yekumanikidza uye yakadzika yekudziya ndiro pasi penzvimbo dzakakuvadzwa dzebhandi zvinoenderana nedhairekitori.
（3, Isa ndiro yekumusoro yekudziya uye kuputira bhodhi panzvimbo dzakakuvadzwa dzebhandi. Gadzirisa mahwendefa epamusoro neepasi.
（4, Isa iyo yekuvhara ganda zvakaenzana uye wosimbisa mabhaudhi.
） 5, Unganidza iyo yekutanga tambo kune magetsi sosi uye yemagetsi kudzora bhokisi. Uye wobva wabatanidza iyo yechipiri tambo nebhokisi rekutonga uye epamusoro uye ezasi mahwendefa.
Ndokumbira utarise kuti inofanirwa kuenderana inoenderana nezviratidzo pabhokisi rekutonga.
） 6） Unganidza mugumo wehosi yepamusoro yekumanikidza neiyo yekumanikidza kweplate yekumanikidza. Uye batanidza mumwe mugumo wepamusoro-wekumanikidza hosi pamwe nekubuda kwepombi yemvura. Chinja, wedzera kumanikidza kuburikidza neiyo vulcanizing muchina.
Iyo midziyo inogona kuve yakasarudzika semhando mbiri: mafuta kumanikidza uye kumanikidza kwemvura.
Pashure: Rail-yakakwira Spot Kugadzirisa Vulcanizing Press yeConveyor Belt
Zvadaro: Cold Bond Cement yeRubber Conveyor Belt Kutsemura Adhesive
Yekufambisa Belt Vulcanization Press
Mucheka Bhandi Vulcanization Press
Rubha Yekutakura Belt Vulcanization Press